नवीन, लुना र केसी डान्स सेन्टर  BRTNepal
काठमाडौं: ११:१७ | Colorodo: 22:32
नवीन, लुना र केसी डान्स सेन्टर
गोविन्द गिरी प्रेरणा २०७५ मंसिर १९ गते ११:३० मा प्रकाशित
प्रवासमा भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो छैन । रोजी रोटीका कामबाट समय निकालेर खासै आर्थिक लाभ नहुने, मनको सन्तोष, आफ्नो करियरको निरन्तरताका लागि गरिने यस प्रकारका क्रियाकलाप यौटा जोस र उमङ्गमा सुरु गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । त्यसैले नेपालमा राम्रो करियर बनाएका प्रतिभाहरू अमेरिकाको मेल्टिङ पटमा बिलाएका छन् । तर थोरै प्रतिभा भने निष्ठाका साथ निरन्तर लागिरहेका छन् । त्यस्ता प्रतिभाहरूमा नृत्य निर्देशक नवीन केसी अग्रपङ्तीमा रहेका छन् । र उनलाई साथ दिएकी छिन् लुना श्रेष्ठले ।
वासिङ्टन डिसी क्षेत्रमा विभिन्न समयमा विभिन्न ग्रुपले वार्षिक रूपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने परम्परा बनेको थियो विशेष दसैँ तिहारको समयमा । पछिल्लो समयमा त्यसको नेतृत्व कलाकार सरोज खनालले गरेका थिए । त्यस क्रममा पनि नवीन केसी त्यस समूहमा सक्रिय थिए । तर सरोज खनाल नेपाल फर्किएपछि त्यो सांस्कृतिक निरन्तरता दिन नवीन केसी जुर्मुराए । उनले लुना श्रेष्ठको सहयोग र साथमा केसी डान्स सेण्टरको स्थापना गरे । त्यही डान्स सेण्टरको ब्यानरमा २ वर्षदेखि नियमित रूपले कलिउड नाइटको नाममा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गरेको छ ।
कलिउड नाइट गीत नृत्य र प्रहसनको प्रस्तुति हो । तर यसमा नवीनले नयाँपन थपेका छन्, सुपरममको प्रस्तुति । यो हरेक वर्ष आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । गैर कलाकार कामकाजी महिलाहरूलाई प्रशिक्षण दिएर प्रस्तुत गरिएको सुपर मम को प्रस्तुति लोभलाग्दो, आकर्षक र सबैको वाहवाही बटुल्ने प्रस्तुति बनेको छ । यसअघि यस्ता प्रकारका प्रस्तुति हुने गरेका थिएनन् ।
यस वर्ष सुपर ममको साथमा साना साना नानीहरूको पनि प्रस्तुतिले भविष्यका कलाकार उत्पादा गर्न सहयोग पुग्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । यस वर्षको कार्यक्रममा कलाकार सरोज खनालको नाट्य प्रस्तुतिले दर्शकलाई रुवाउन सफल भएको थियो, त्यसलाई अझै पर्फेक्ट बनाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि । यो कार्यक्रमबाट उठेको पैसामध्येबाट चेपाङ समुदायको लागि रकम हस्तान्तरण नेपालमा भयो । यो अर्को सामाजिक महत्त्वको काम भएको छ । केसी डान्स सेण्टरले नियमित रूपमा सशुल्क नृत्य प्रशिक्षण गर्दै आएको छ । तर आजको समय अनलाइनको समय हो । फेरि सबैले भौकित रूपमा प्रशिक्षण स्थल गएर प्रशिक्षण लिन पनि सहज छैन ।
त्यसलाई दृष्टिगत गरेर अनलाइन निःशुल्क नृत्य प्रशिक्षणको अवधारणा अघि सार्दै फेसबुकमा राखिएको छ केसी डान्स सेण्टरको तर्फबाट । यो पनि छोटो समयमै निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । यी सब गतिविधिहरूका लागि केसी डान्स सेण्टरलाई साधुवाद त दिनै पर्छ । यसमा सहभागी हुनका लागि प्रेरित पनि गर्नुपर्दछ ।
केसी डान्स सेण्टरको विषयमा यो वेबसाइटमा गएर विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सकिन्छ:
गोविन्द गिरी प्रेरणाका अरू रचना
बिचार :गाभाको विश्व यात्रा
बिचार :डा.श्याम कार्कीलाई अनेसासको बोर्ड अफ ट्रस्टीको दोस्रो कार्यकालका लागि किन जिताउन हुन्न ?
शृङ्खलाको जीत, निर्मलाको हार
गाभाको विश्व यात्रा
यो समय नारी हुनुमा भाग्यमानी शृङ्खला वा अभागी निर्मला ?
विद्रोही प्राज्ञ-प्रेमा शाह
भिक्षुहरूको दिन चैर्या मात्र होइन दिमाग पनि सन्यासी नै हुन्छ
अनेसासको बोर्ड अफ ट्रष्टीजका अध्यक्षमा गीता खत्रीको सम्भावना प्रबल
दार्चुलाका विद्यार्थी जोशीले आफैले बनाएर ड्रोन उडाए
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज एच डब्लू बुसको ९४ वर्षको उमेरमा निधन
बोस्टनमा सिर्जना उत्सवको ३८औं शृंखला
विश्व भ्रमणमा रहेका योगीहरू लस एन्जलसको पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिरमा आउने
नाम, उपनाम, छद्मनाम
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अपाङ्गतासम्बन्धी महासन्धिमा उल्लेखित अधिकार सुनिश्चित गर्न सासंद आचार्यको माग